Mampihidina... - I2P
Hanomboka ny fampidinanao, raha tsy mandeha ao anatin'ny 5 segondra dia tsindrio ny Eto.
Asa aorian'ny fametrahana
Rehefa avy nandefa ny fametrahana teo amin'ny widows, dia tsindrio fotsiny ny bokotra "Start I2P" izay hanaokatra ny pejy router console, izay manana toromarika hafa any aloha any.
Ho an'ny solon-tsaina mampiasa UNIX, i I2P dia azo velomina ho servisy amin'ny alalan'ny fampiasana ny baiko "i2prouter", izay hita ao anaty toerena nofidiana nampetrahana azyteny ambohaloany. Mandehana ao amin'io toerana io, ary ny "sh i2prouter status" dia hilaza ny fipetraky ny router. Ny baiko "start", "stop" and "restart" dia mibaiko ny servisy. Ny router console dia azo jerena ao amin'ny toerany mahazatra. Ho an'ny mampiasa OpenSolaris sy ireo solon'tsaina hafa izay tsy mahazaka ny wrapper (i2psvc) dia ity kosa no baiko ampiasaina "sh runplain.sh" .
Rehefa mametraka eny ambohalohany , dia tadidio ny manao fanamboarana ny NAT/rindrin'afo raha hainao, sady jereo tsara ny port makany amin'ny internet izay ampiasain'i I2P, voalaza eto. Raha tafasokatra ara-dalana ny ports izay mamela ny TCP mihiditra, dia velomy koa ny TCP mihiditra ao amin'ny configuration page.
Jereo indray mandeha sady adjust the bandwidth settings eo amin'ny configuration page, satria somary maivana ny of 96 KBps down / 40 KBps up , izay efa eo.
Raha te ahita pejy eepsites avy amin'ny fikirakiranao ianao, jereo ny pejy browser proxy setup ahitanao fanoroana mora.